Preghiera del 5 Agosto compleanno della Madonna | Ilblogdellafede
Ekpere nke August 5 ụbọchị ọmụmụ nke Nwanyị nwanyị anyị
Paolo Tescione	Edere ya Ọgọstụ 5, 2020 Ọgọstụ 5, 2020
Taa 5 August ka anyị na-echeta ọmụmụ nke nne nke elu-igwe, nke kachasị mma ebe omume ọma, amara na ịma mma ọ bụla bi.
N’ụbọchị ukwu a ka Chineke kpebiri ike. Nna nke pụrụ ime ihe niile kpebiri ike ihe niile ọ nwere. Chukwu n’ime Meri kere ịdị mma, udo, ịhụnanya, ntụkwasị obi, ntụkwasị obi, ọ ,ụ. Meri bu onye zuru oke ebe Ezi Nna kere ihe nile diri mmadu nile.
Taa uwa nile n’etughari otuto ya nye Chineke Niile mmadu kele Chineke maka ichebara ihe kachasi mma ma mara mma echiche. Meri bụ ihe ekere eke nke naanị uche Chineke nwere ike ịmepụta.
“Ezigbo nna m, onye hụrụ gị n'anya nke ukwuu, taa, akpọrọ m ala n'ụkwụ gị. Mkpụrụ obi m na-ebi na Paradaịs naanị ka ọ bụrụ nwa Meri ”.
Otu echiche ikpeaz chigharịkwuru gị ezigbo nne nne Mary kacha Nsọ. Enwere m mpako ịbụ Onye Kraịst, enwere m afọ ojuju na m bụ nwa gị, enwere m mpako na amụrụ m ma keekwa gị ka m nọrọ gị nso. Mmechi gị bụ akụ kacha elu m nwere bụ amara kacha mma nke Chineke nwere ike inye m. Ezigbo mama m, ọ bụrụ n’otu ụbọchị ị ga - achọ isi na m pụọ, ị ga-ahapụ m ka m pụọ n'okike ma hapụ m aka. Enwere m mmetụta na enwere ike ma gbasie ike naanị n'akụkụ gị.
Taa ka m choro gi otutu ochicho gi na ncheta omumu gi ma n’abia taa, m cheta. Nke a bụ ụbọchị mgbe Chineke nyere onyinye nke ndụ m, nyere nnukwu akụnụba m niile, nye m ma nwee nwoke ọ bụla ihe kacha ya mma, mara mma ya zuru oke na nke zuru oke.
Ochicho nne kachasi nma Maria Maria kam kam choro ezigbo obi uto maka inwetara amara ka ibu nwa gi. Amen
← Na post gara aga Gara aga post:6 uzo Mo Nso na agbanwe ndu anyi
Ọzọ Post → Post ozo:Na-atụgharị uche taa maka mgbanwe nke Chineke mere na mkpụrụ obi gị